Diki duramazwi rekudyara mumusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Hapana mubvunzo kuti kujairana kwakanyanya nematemu emusika wemasheya kunobatsira varimi kuti vave nani zvakanyanya kuita mashandiro avo mumisika ye mari yakasiyana-siyana. Izvo hazvigone kukanganwika kuti muhomwe imwe inoshandisa mazwi akasarudzika, uko kunowanikwa mazwi echiRungu. Izvi zvinokonzeresa kuti vamwe vano saver vane rimwe dambudziko kuendesa mafambiro avo kuti mari iriko iwane purofiti. Nekuzvipira kushoma uye neakanaka dhizaini ivo vachakwanisa kugadzirisa iri dambudziko rinoonekwa kwavari muchikamu chekudyara.
Mumisika yemasheya pachave nemazwi mazhinji ehunyanzvi ayo achazoda kuedza kukuru kwekunzwisisa kwavo chaiko. Hazvishamisi kuti vazhinji vavo vanobva kuhupfumi uye zvakakosha kwazvo kuzvichengeta mupfungwa kana uchitanga mashandiro mune chero musika wezvemari. Kwete chete mumusika wemasheya, asi mune mamwe akadai semari, zvigadzirwa, simbi dzakakosha kana mari yakatarwa. Hapana chinhu chinofanirwa kusiiwa chichigadziriswa, kunyangwe iwo mutauro wacho.
Kune rimwe divi, ichokwadi zvakare kuti chichava a kuwedzera kukosha kuti iwe unogona kuve mukubatana kukuru nemazwi aya. Nekuti zviripo, ichokwadi kuti ese mazwi ane chekuita nekudyara ndeaya anozokubatsira iwe muzuva rako zuva nezuva mumunda wehupfumi. Naizvozvo, zviripo zvakafanira kuyedza kweiyi hunhu. Nekuti iwo mubairo unogona kuve mukukwirira kwepamusoro kwemabasa anoitwa mumisika yemari.
1 Ipfupi duramazwi kushanda
2 Migumisiro yezvikamu
3 Maitiro emari mumusika wemari
4 Kuparadzanisa mukudyara
5 Purofiti, fungidziro, nezvimwe.
Ipfupi duramazwi kushanda
Una rating agency Icho chinongedzo chinoratidzira solvency yemupi chero mupi wekuchengetedza pamusika. Pakati pezvakanakisa kuzivikanwa pane zvimwe zvakakosha zvakadai seMoody's, Standard & Varombo uye Fitch.
Mukubvumirana kwezvimwe zvigadzirwa zvemari zvisiri zvekutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya, chii chinonzi kukwezva kwemari. Zvakanaka, izvi zvinonyatso kureva musiyano uripakati pemutengo wezvekunze zviwanikwa zvine kambani nekuwana purofiti iyo inowanikwa pamwe nezvinhu zvakawanikwa neizvozvo zviwanikwa.
Imwe yemashoko akajairika mumisika yemasheya ndeye iyo ine chekuita neiyo chikamu chebhadharo uye izvo zvinoreva zvakananga kuenzanisa kwemari uye kubhadhara kwehupfumi hwenyika.
Kwete yekukosha kudiki ndeye berekai mushamba uye kuti chirevo cheAnglo-Saxon chinoratidza kuderera mumusika wemasheya. Iwe unowanzozviona pasi peichi chirevo uye kwete muchiSpanish, kunyanya kana ichireva kune epasi rese misika yemari.
Kana uchitaura nezve yakanyorwa kambani, zvakajairika kutaura nezvayo mutero kubatsirwa. Zvakanaka, kubva ikozvino zvichienda mberi, iwe unofanirwa kuziva izvo zvatiri kutaura nezve chikamu chemubatsiro wavo uye kuti chinozivikanwa nekuti vanoonekwa sevanobhadharisa nzvimbo yezvinangwa zveMutero Mutero. Naizvozvo, haina chekuita neyakaipisisa purofiti yemakambani.
Zvakare mazuva ano izwi rinowoneka nehumwe huwandu munhau Junk zvisungo. Icho hachisi chinhu chakaderera pane yakatarwa mari chengetedzo yakapihwa ine yakanyanya kufarira nemakambani ane njodzi huru
Mamwe mazwi akabatanidzwa zvakanyanya kune izvo zvehunyanzvi kuongorora kana maitiro ako wega mumisika yemari. Sezvo iri chaiyo kesi ye buy-back uye zvine chirevo chaicho kugovana. Kana semuenzaniso, musoro nefudzi izvo mukuongorora kwehunyanzvi, chimiro chinoratidza shanduko mumusika maitiro. Iyo inozivikanwa zvakare pakati pevashoma nepakati varimimari sefudzi-musoro-bendekete.
Kune rimwe divi, kana uchitaura nezve stock stock, izwi rinoshandiswa zvakanyanya. musika wekutengesa capitalization chinova chinhu chakareruka semutengo wepasirese wezvikamu zvese zvekambani zvakanyorwa pamisika yemari. Kuve wenguva dzose mukuongorora kwakakosha kwakakosha munyu wayo.
Kune rimwe divi, iwo mazwi ayo anobva kune iwo mashandiro chaiwo anogadzirwa mumakambani akanyorwa pamisika yemari haangakanganike kana. Ndiani asina kumbonzwa mune yakasarudzika midhiya chii a cash flow? Kune avo vasingazive kuti iri izwi reAnglo-Saxon chii, zvichave zvakafanira kuvaudza kuti inongova mari inogadzirwa nekambani mushure mekubhadhara mari nekutora kutengesa. Icho chikamu chakakosha kwazvo cheruzivo kuti uongorore mhedzisiro yekota iyo makambani akanyorwa anofanirwa kupa.
Kune rimwe divi, kune mazwi ekuti vashoma uye varipakati vane saizi vashandisi vanoshandiswa zvakanyanya, kunyanya avo vanosarudza mamwe ekufungidzira mashandiro uye ayo anoreva kune vanozivikanwa se pizi. Muchiitiko ichi, icho chikamu chemusika wekutengesa unoreva kuchengetedzeka zvine hushoma hushoma uye hune kuchengetedzeka kushoma mukutengesa. Ivo vanozivikanwa nekuti vanogona kuburitsa yakakosha mibairo, asi zvakare vakatakura hombe njodzi nekuda kwenjodzi huru inoitwa nemabasa avo.
Maitiro emari mumusika wemari
Nezve ino yakakosha nzvimbo mune hupfumi, iyo kutenderera kwemari zvakabatana zvakananga nemamiriro ezvinhu mumisika yemari. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti vanoona iyo nguva yenguva yechimiro chakatsanangurwa uye icho chingave chinosimudzira, chinokwikwidza kana kunyangwe chakasarudzika. Izvo zvakakosha kwazvo kuti uzvizive nekuti pasina kupokana inogona kupa makiyi akakodzera ekupinda kana kubuda mumisika yemasheya. Pamusoro pekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu kana kunyangwe kubva pakakosha maonero emakambani.
Rimwe izwi iro riri mukurumbira mune ese akasarudzika midhiya ndere iro rinoreva iyo pedyo. Iri izwi rakajairika rinorevei pakutanga kuona? Zvakanaka, chimwe chinhu chakareruka senguva iyo chibvumirano chinopera zviri pamutemo mumusika wemasheya. Ndokunge, kana misika yemari yakavharwa uye iyo yeSpanish stock stock inoenderana ne17,30. Kufanana nesangano rerudziro uye kuti mune ino kesi hazvireve chinhu zvishoma uye hapana chimwe kunze kwekudzoka kwekambani, asi zvisatomboitika mune izvo zvakabatana neinogona kuwana purofiti. Idzi ipfungwa dzinopedzisira dzabatsira muzvinashawo kuti aite zvisarudzo zvavo nezvivimbiso zvikuru zvekubudirira Kunyangwe ivo vari kuchengetedza chero mhando mabhenefiti erudzi chero rupi zvaro.
Muchikamu chino vaverengi vedu vanenge vanzwa pane anopfuura nguva imwechete nzira dzekugadzira dzakarurama kusiyanisa mune edu ekudyara. Kana chero munhu achigere kuzviziva izvozvi, zvinokwana kutaura kuti iri risina kuoma izwi rinoreva kuti nzira inoenderana nekusaisa zvinhu zvese mumhando imwechete yekudyara. Kana izvo zvakafanana, kusaisa mari yese mudengu rimwe chete, ingave inogoverana pamusika wemasheya, mari yekudyara, mvumo kana kunyange yakatarwa-temu bhangi dhipoziti. Pane kupokana, inofanirwa kuiswa mune akasiyana zvigadzirwa zvemari dai zvaigoneka kune vashoma nepakati varimi.
Uye hatifanirwe kukanganwa kuti a mugove paakaundi uye iyo yakasarudzika. Yekutanga yeiyi ndiyo chaiyo purofiti inopihwa sekufanoona kwemhedzisiro mhedzisiro inotarisirwa uye inogamuchirwa nevane masheya emakambani anoibhadhara nguva dzose. Nepo pane izvo zvinopesana, chikamu chimwe chete ndicho chinounganidzwa panguva imwe chete, pachinzvimbo chekupa chikamu chenguva pfupi uye nezvimwe, zvakaita semubhadharo unowirirana. Kune rimwe divi, ndiani asati ambotengesa mari yemari pazasi pemitengo yemusika. Zvakanaka, pamwe vakaita basa iri risingabatsiri vasingazive kuti izvo zvavaiita panguva iyoyo kwairasa.
Purofiti, fungidziro, nezvimwe.
Izvo zvinonzi EBITDA inogara iripo mumabhizinesi mhedzisiro emakambani anotengeswa neruzhinji. Zvakanaka, hapana chakareruka pane kuchishandura zvakananga kuratidza kuti tiri kureva purofiti pamberi pechimbadzo, mitero, amortization uye zvinopihwa. Icho chikamu chakakosha kwazvo cheruzivo kuti uone kana iri nguva chaiyo yekudyara mari mukambani. Kune rimwe divi, vaongorori vezvemari vanoteerera zvakanyanya kune ino yakakosha paramende yezvehupfumi uye kukanganisa kukosha kwayo kwekuongorora kukosha kwemusika wemasheya.
Imwe yemashoko akashandiswa zvakanyanya muhukama nenyika yemari iri kugadzirisa. Mune ino chaiyo kesi isu tiri kutaura nezve imwe mari yemari senge mari. Naizvozvo, isu tiri kutaura pamusoro peiyo mwero wekutsinhanha uyo wepakati mabhangi anomisikidza zuva nezuva kune yavo mari vachipesana nevamwe. Iko dhora neeuro ndiwo manyuko makuru ereferenzi mumusika unoshanda zvakanyanya uye unozivikanwa nekusagadzikana kukuru pakuisa shanduko dzezuva nezuva. Ndichiri kune rimwe divi, iyo Forex Ndiwo musika wekuchinjana kwekune dzimwe nyika unobvumidza vatengesi kubva kumativi ese epasi kuchinjana mari pakati pevanopa uye vanonyorera zvakafanana. Chekupedzisira, iyo yakasununguka ichiyangarara inoreva icho chikamu chemari yemari iyo inoshambadzirwa zvakasununguka pamisika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Diki duramazwi rekudyara mumusika wemasheya